२७ बुँदे घोषणाको विरुद्धका कोही गयो भने आन्दोलन गर्छौँ - Ratopati
- | चित्र बहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी जनयुद्ध गरेर आएकोले पनि होला, एमाओवादीको भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) किसानको लागि भनेर धेरै चर्का नारा लगाउने संगठन थियो । अहिले यही बैशाख २७ गते महोत्तरीको बर्दिबासमा सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलनका तयारीका लागि जुटेको छ । जनयुद्ध र त्यसपछिका दिनमा पनि किसानका हितका लागि भनेर चर्को नारा लगायो । संयोग अहिले उसकै मातृ पार्टीले कृषि मन्त्रालय पनि सम्हालेको छ । किसानका लागि नारा मात्र लगाईरहने संगठनले आफ्नै मन्त्रालय भएको बेला व्यवाहारीक रुपमा के ग¥यो किसानको पक्षमा र के घोषणा गर्दैछ ? राष्ट्रिय सम्मेलनमा धेरैलाई चाँसोको विषय पनि हो । आफ्नै पार्टीको मन्त्रालय सम्हालेको बेला राष्ट्रिय सम्मेलनमा उक्त संगठनले किसानका लागि के खुसीको कुरा दिँदै छ त ? उक्त संगठनका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठसंग रातोपाटीकर्मी भरत पाण्डेले गरको कुराकानी :
सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन कस्तो छ तयारी ?
अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी आफ्नो ऐतीहासिक सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा तीब्रताका साथ जुटिरहेको छ । अहिले यहाँसम्म आउँदा सबै आन्तरिक विषय सम्पन्न गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । अन्तिम तयारीको चरणमा छौँ । अहिलेसम्म ६० जिल्लामा सम्मेलनद्वारा जिल्ला कार्यसमिती चयन गरेको छ । ७५ वटा जिल्लामा संरचना भएकोले अरु जिल्लाहरुमा पनि जिल्ला भेला सम्मेलनका समयहरुका मिती तोकिएर अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्था छ ।
एक त कम्युनिष्ट, त्यसमा पनि किसनका पक्षमा वकालत गर्ने माओवादीको संगठन । यो सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलनले किसानको पक्षमा के निर्णय गर्छ ?
राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अघि बर्ढाँैँ र क्रान्तिकारी किसान आन्दोलनलाई सुदृढ गर्दै सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन सफल पारौँ भन्ने मुल नाराका साथ यो सम्मेलन हुँदैछ । आत्मनिर्भर कृषिको विकास गरौँ, खाद्यान्नमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्रौँ लगायतका क्रान्तिकारी भूमिसुधार, सरकारले भर्खरै पारित गरेको २० वर्षे दीर्घकालिन कृषि रणनीति, सरकारले जारी गरेको २७ बुँदे रणनीतिलाई तुरुन्त लागु गर्ने दिशातीर, त्यसले राखेका नाराहरुलाई परिमार्जनसहित राखेर सुझावसहित दवावमुलक ढंगले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलन अगाडि बढीहेको छ अहिले ।
तपाइँले नाराको रुपमा विषय उठाएको त धेरैवर्ष भयो । धेरैवर्षदेखि लगाईएका नाराहरु कार्यान्वनका लागि यो सम्मेलनले केही गर्छ ?
पहिलो हाम्रो संगठनात्मक ढाँचा पुरानो विचार राजनीतीबाट मात्रै नेतृत्व अगाडि बढीरहेको छ । यसले संगठनमा पनि महिला कार्यकर्ताहरुलाई, यूवा कार्यकर्ताहरुलाई र उतीपडत्ी वर्गबाट आएका कार्यकर्तालाई संरक्षण र विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ । विचार र राजनीतीबाट संगठत्ी गर्दै आएको यो किसान संगठनले अव आफना नेता कार्यकर्तालाई उत्पादन र सहकारीमा जोड दिँदै व्यवसायमुलक रुपमा अगाडि बढाउने नीती लिएको छ ।
अहिले कृषि मन्त्रालय सम्हालेको एमाओवादी पार्टीको भ्रातृ संगठनले मधेश केन्द्रित गरेर सम्मेलन गर्न थाल्यो, किन मधेश रोज्नुभयो ?
मुख्य कुरो यो हाम्रो किसान आन्दोलनको बिरासत हो । त्यसमा पहिलो कुरा हाम्रा महान किसान नेता र शहिदले तराईका अन्त्यन्तै पिछडिएका, शोषण दमनमा परेका किसानलाई संगठत्ी गर्दै ठूला ठूला किसान संघर्षको नेतृत्व गरेको ठाउँ हो । बारा, पर्सा, रौतहट, सुनसरी, सर्लाही धनुषा यी भु–भागमा विगतमा यहाँ ठूला ठूला किसान संघर्ष भएका थिए । त्यहाँ किसान नेताहरुले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । हाम्रा अग्रज किसान नेता जयगोविन्द साह, सूर्य नाथ यादव जसलाई राज्यले पनि शहिद घोषणा गरेको छ, मुखलाल महत्तो जो १२ सालमा बारामा किसान संघर्षकै नेतृत्व गर्दा प्रतीकृयाबादीले गोली हानेर मारेको थियो, जगन्नाथ नेपाल जो ठूलो किसान नेता हुनुहुन्थ्यो, रामबृक्ष यादव उहाँ तराई किसान आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ । हाम्रा पूर्खाहरुले त्यहाँ किसान आन्दोलनको एउटा विरासत कायम गर्नुभयो । जसले तराईका किसानहरुलाई संगठित र मुक्ति दिलाउने आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो । त्यसको स्वामित्व हाम्रो संगठनले लिन चाहन्छ । अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी अहिले त्यसैका लागि महोत्तरीको बर्दिबासमा आफ्नो सम्मेलन गर्न लागिरहेको छ ।
संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान आएपछि त किसान मजदुरको अधिकार सुनिश्चिता गछौँ भन्ने संगठन हो तपाईँको । नयाँ संविधानमा तपाइँको संगठनले विगतमा उठाएका किसानका कुन अधिकारको सुनिश्चितता ग¥यो भनेर सम्मेलनमा किसानहरुलाई उपहार दिनुहुन्छ ?
हामीले नेपाली किसानहरुको अधिकारका निम्ति जो संघर्ष ग¥यौँ, संगठत्ी ग¥यौँ र जे उद्देस्यका लागि आन्दोलित बनायौँ, त्यो मुख्य कुरा नेपालमा किसान मजुदुर र उतीपडित वर्गको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि थियो । ती किसानको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि, नयाँ संविधानमा त्यो राख्नका लागि धेरै ठूलो प्रत्यत्न ग¥यौँ । तथापी हामी सबै कुरा ल्याउनका लागि सफल हुन सकेनौँ । तर अहिले जो संविधान आएको छ अहिलेसम्मका संविधानमा सबैभन्दा बढी जनताका अधिकार, किसानका अधिकार सुनिश्चित भएको प्रगतीशिल संविधान हो । यद्यपी यो भन्दा धरै राम्रो र असल संविधान ल्याउन चाहान्थ्योँ तर त्यो परिस्थिती निर्माण हुन सकेन ।
तैपनि यसमा नेपाली किसानका छोराछारीको रोजगारीको व्यवस्था, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीता, बैज्ञानिक भूमिसुधारका कुराहरु नयाँ संविधानमा आएका छन ती उपलब्धि नै हुन् । हामीले ती उपलब्धिको रक्षा गर्दै किसानहरुको आमुल परिवर्तनको दिशातीर अगाडि बढाउन चाहन्छौँ । त्यसैले प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्दै बाँकी उपलब्धीको प्राप्तीका लागी संघर्ष गर्नुपर्छ भनेर भन्न चाहन्छु ।
दीर्घकालिन कृषि रणनीति सार्वजनिक गर्ने कुरा, मन्त्रालयबाट २७ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा रहेका विषय किसानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति, किसानलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नका निम्ति अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । त्यो २७ बुँदे प्रतीवद्धतामा उल्लेख भएका किसान आयोगका कुरा, किसानलाई बर्गिकरणको आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्ने कुरा आएको छ ।
किसानको पक्षमा धेरै आवाज उठाउँछौँ भनेर दावी गर्ने तपाईँको संगठन, संविधानमा पनि सबै कुरा राख्न सक्नुभएन, यो सम्मेलनबाट नयाँ केही व्यवहारिक कुराको शुरुवात हुन्छ ?
मुख्य कुरा त हाम्रो यो राष्ट्रिय सम्मलेनले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र आगामी कार्ययोजना घोषणा गर्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र भूकम्पबाट पीडित किसानको लागि पुनर्निमाणको कुरा र क्रान्तिकारी भूमिसुधार, आत्मनिर्भर कृषि विकासको कुरा देखि लिएर खाद्य सम्प्रभुता ऐन तत्काल लागु गर्नुपर्छ भनेर हामीले आफ्ना भावी योजनाहरुमा अगाडि बढ्छौँ ।
तपार्इँकै मातृपार्टीले मन्त्रालय पनि सम्हाहालेको अवस्थामा यो सम्मलेन हुँदैछ, यो अवसरमा के गरयौँ भनेर सम्मलेनमा भन्नुहुन्छ ?
अहिले हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष नै कृषि विकास मन्त्री हुनुभएको छ । उहाँ आईसकेपछि यहाँ नीतिगत रुपमा किसानको पक्षमा धेरै नै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सफल हुनुभएको छ । जस्तै दीर्घकालिन कृषि रणनीति सार्वजनिक गर्ने कुरा, मन्त्रालयबाट २७ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा रहेका विषय किसानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति, किसानलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नका निम्ति अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । त्यो २७ बुँदे प्रतीवद्धतामा उल्लेख भएका किसान आयोगका कुरा, किसानलाई बर्गिकरणको आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्ने कुरा आएको छ । किसानहरुलाई पेन्सन वितरण गर्ने कुरा आएको छ । कृषिमा विकास गर्नका निम्ति, व्यवसायीकिकरण गर्नका निम्ति पकेट क्षेत्र घोषणाका कुरा आएका छन् । यी अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हुन् । यी सबैको नीतिगत पक्षमा मन्त्रालय दु्रततर रुपमा अगाडि बढेको छ ।
कार्यान्वयनका दिशामा जान बाँकी छ । अव मन्त्रीले ढिलो नगरी प्रतिवद्धताकै जगमा टेकेर कार्यान्वयनको दिशामा जानुपर्छ । नेपाली किसान लाभान्वित हुने कुरामा ढिलो नगरी जाने कोसिस भईरहेको छ । किसान पेन्सनलाई व्यवहारीक रुपमै कार्यन्वयन गर्नका लागि पहल शुरु भएको छ । तर, यी सबै भएर पनि हाम्रो संगठन सन्तुष्ट छैन किनकी यी प्रतिवद्धतालाई तुरुन्त कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
यहाँले जती उत्साहका साथ, गर्वका साथ भन्नुभएको छ–किसान आयोग, किसान पेन्सन र परिचयपत्रको कार्यान्वयनको बारेमा, विभीन्न किसान संगठनले उत्तिकै विरोध पनि गरेका छन् । यो तत्काल कार्यान्वयन होला ? कत्तिको विश्वस्तु हुनुहुन्छ ?
यो हुनैपर्छ, अव ढिलाई नगरि । जे प्रतिवद्धतामा आएका छन्, यी महत्वपूर्ण पक्ष छन् । यी किसानहरुको हितको निम्ति, अधिकारको निम्ति र किसानहरुलाई समृद्ध बनाउनका निम्ति आएका हुन् । अव ढिलो नगरी मन्त्रीले कार्यन्वयन गर्नुपर्छ ।
केही साथीहरुले यसको विरोध जनाउनुभयो । यो पपुलिष्ट कार्यक्रम हो भनेर किसान महासंघको सह अध्यक्षले नै भन्नुभयो, यो ठीक होईन । त्यो प्रकारको आलोचना विल्कुल ठीक थिएन । यो साहसिक कदम थियो, जनपक्षिय कदमलाई जसरी पपुलिष्ट भनेर खण्डन गर्ने प्रयास भएको छ, बिरोध भएको छ त्यो गलत हो । अखिल नेपाल किसान महासंघ किसान राष्ट्रिय सञ्जालमा छ, किसान राष्ट्रिय सञ्जालले उठाएकै एउटा महत्वपूर्ण मागमा किसान पेन्सन पनि थियो । किसान आयोग, किसान परिचय पत्र थिए । तर फेरी कार्यान्वयनको बेला आईसकेपछि त्यही संगठनका सह अध्यक्षले हल्का ढंगले हेरेर असहमती जनाउनुभयो । यो वास्तवमा यो उहाँको व्यक्तिगत धारणा होला । मैले पछि किसान महासंघका नेताहरुलाई बुझेँ कि उहाँहरुले हिँजो हस्ताक्षर गनुृभएको छ, किसान पेन्सनको माग गरेर कृषि विकास मन्त्रालयमा पेश गरेको मागपत्रमा । तर किसान आन्दोलनका पक्षमा आन्दोलन गरेका नेता बामदेव गौँतमजीले पठाएको प्रतिनीधिले किन असहमती जनाउनुभयो, म अचम्म छु ।
कम्यूनिष्टहरुको काम नै यस्तै, कार्यक्रम मिलेर बनाउने तर कसको पालामा घोषणा भयो भनेर आलोचना शुरु गर्ने यसको अन्त्यका लागि यो सम्मलेनबाट केही शुरुवात होला ?
स्वभाविक रुपमा हुन्छ । यो २७ बुँदे कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले जुन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर अहिलेको मन्त्री वा भोली कोही मन्त्री आउँदापनि आलटाल गर्ने कोशिष गरियो भने त्यसको विरुद्धमा अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी जान्छ । आन्दोलनकै विचबाट यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पनि अहिलेको यो राष्ट्रिय सम्मेलनले गर्ने छ ।
यहाँले अघि २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिको प्रसंसा त गर्नुभयो । तर यो किसानका सरोकारवालासंग छलफल नभई बिदेशीको निर्देशनमा तयार गरिएको भन्ने आलोचना छ । नेपाली भाषामा समेत छैन । अँग्रेजी भाषा बुझ्नेले मात्र पढ्न सक्ने रणनीति कसरी किसानको हुन्छ ?
यो पाँचतारे होटलहरुमा र मन्त्रालयमा निश्चित मान्छेहरु बसेर तयार गरिएको हो भन्नेहरुपनि केही छन् । तर त्यो होईन । स्वयं हाम्रो किसान संगठन यसको निर्देशक समितिमा रहेर काम गरेको छ । यसमा देशका सबैभन्दा ठूला राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले एमाओवादी लगायत अन्य ससाना दलहरु समेत सहभागी रहेको राष्ट्रिय किसान सञ्जाल छ । त्यो राष्ट्रिय किसान सञ्जालका ४ जना प्रतिनिधी यसको निर्देशक समितिमा बसेर तयार पारिएको हो । यो कुनै होटलमा भन्दा पनि सबै क्षेत्रका जनताको विचमा, हलो जोतीरहेका किसानको विचमा, अगुवा किसानको विचमा गएर देशभरीमा सयौँेका संख्यामा अन्तरक्रिया, भेटघाट, छलफल गरेर जतताको सहभागीतामा उनीहरुको समेत मूख्य भुमिकामा यो निर्माण भएको हो । जे जती बिरोधका स्वरहरु आईरहेका छन यसको कुनै औचित्यता छैन र बस्तुपरक छैनन् ।
यो अँग्रेजी भाषामा भयो । नेपालीमा उल्था गरेर आउनुपर्छ भनेर । मन्त्रालयले नेपालीमा उल्था गरेर जारी गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरिरहेका छ । यसलाई छिटो भन्दा छिटो नेपालीमा जारी हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
यहाँले जती उत्साहका साथ, गर्वका साथ भन्नुभएको छ किसान आयोग, किसान पेन्सन र परीचयपत्रको कार्यान्वयनको बारेमा, विभीन्न किसान संगठनले उत्तिकै विरोध पनि गरेका छन् । यो तत्काल कार्यान्वयन होला ? कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
विशेष गरेर, २७ बुँदै हामी अहिले किसानका हितका कुरा, किसानको आर्थिक अवस्थामा सुधारका कुरा छन् । त्यसैलाई कार्यान्वयनको लागि नै जोड दिन्छौँ ।
पहिलो कुरा त यो दीर्धकालीन कृषि रणनीतिको विषयमा सबै पार्टीका नेताको साझा सहमतीको आधारमा रणनीति तय भएको हो । सबै पार्टीका नेताहरुमा समेत यो विषय पुगेको छ । जो सुकै सरकार परीवर्तन होस यो २७ बुँदे कार्यान्वयन हुन्छ । यसले सरकार परिवर्तनका कारणले कार्यान्वयनमा बाधा पुग्छ भन्ने छैन । जो आएपनि अगाडि बढ्छ ।
माओवादीका प्राय भ्रातृसंगठनहरुमा पार्टीले टिका लगाएर नेता चुन्ने चलन छ, तपाईँहरुले नेतृत्व चयन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, भावी नेतृत्वको विषयमा के योजना छ ?
किसान संगठनले आफनो भुमिका प्रष्टसंग निर्वाह गर्दै अगाडि बढिरहेको स्थितिमा पदाधिकारी र सिँगो केन्द्रीय समिति स्वविवेक प्रयोग गरेर निर्णय गर्नुस भनेको छ, पार्टीले । हामीले त्यसलाई अनुमोदिन गर्छौँ भनेर पार्टीले हामीले भनिसकेको छ । हामीलाई के विश्वास छ भने किसान संगठन भित्र त्यस्ता अस्वस्थ अन्तरविरोधहरु छैनन् । त्यसैले हामीले फेरी पनि हाम्रो विचबाट छलफल र सहमती गरेर अगाडि बढ्छौँ र नेतृत्वदेखि लिएर केन्द्रीय समितीमा पूर्ण रुपमा सहमती गरेर नेतृत्व चयन हुन्छ । हामी विचमा कुने खिचातानी छैन ।
अन्तमा, एउटा किसानको पक्षमा नारा लगाउने संगठनको तर्फबाट सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा किसानसंग केही कुरा छन् ?
म अहिले आम देशबासी किसान दाजुभाई दिदीबहिनीहरुलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने नेपाली किसान आन्दोलनको मुल प्रवाहको रुपमा अगाडि बढेको हाम्रो गौरवशाली संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) जुन ऐतीहासिक रुपमा सम्पन्न हुन गईरहेको छ, यो राष्ट्रिय सम्मेलनले पारत्ी गर्ने किसान आन्दोलनको भावि कार्यदिशा र भावी कार्ययोजना लगायतको जुन चिज छ, त्यसलाई यहाँहरुले गम्भीरतापूर्वक बुझिदिनुहुन र आत्मसात गरीदिनुहुन म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु् । किनकी यो संगठनले हिँजोका दिनदेखि नेपाली किसानहरुको हकहितका निम्ती महान जनयुद्ध लगायत ठूला ठूला परीवर्तनका आन्दोलनमा महत्वपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै पनि आईरहेको छ । जो अहिलेको परिस्थितीबाट किसान निराश हुनुपर्ने अवस्था छ, यो अवस्थामा म देशबासी सम्पूण किसान दाजुभाई दिदीबहिनीलाई के विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्री नेपाली किसान जसले अहिलेसम्म आफ्नो जीवन वितायौँ, हामीले जसरी–जसरी परिवर्तनकारी आन्दोलनलाई साथ र सहयोग ग¥यौँ, अहिले पनि हाम्रो भूमिका महत्वपूर्ण छ । यो संक्रमणकालको अत्यन्तै पेचिलो र उदासलाग्दो अवस्थाबाट निराश नहुँन अनुरोध गर्दछु । हामी एक एक गर्दै जित्दै अगाडि बढ्न सफल हुँदैछौँ ।